बागलुङका एमाले वडा अधिवेशनः नेतृत्वमा महिला शून्य :: रामबहादुर थापा/रासस :: Setopati
बागलुङका एमाले वडा अधिवेशनः नेतृत्वमा महिला शून्य
बागलुङ, कात्तिक ७
नेकपा एमालेको आसन्न महाधिवेशनका लागि सुरू भएको वडा अधिवेशनमा बागलुङका ७१ वडामा नेतृत्व चयन भएको छ । तीमध्ये नेतृत्व तहमा महिलाको सहभागिता शून्य रहेको छ ।
अधिवेशन हुन बाँकी रहेका १४ वडामा पनि महिला नेतृत्वमा आउन सक्ने छाँटकाट देखिएको छैन । कमिटिमा ३३ प्रतिशत भन्दाबढी महिलाको सहभागिता रहेको दाबी गरिएपनि मूल नेतृत्वमा पुरुष मात्र चुनिएका हुन् । जिल्लाका ८५ वडामध्ये एउटामा पनि महिला नेतृत्व चुनिन नसक्नु समावेशी सिद्धान्त विपरीत भएको कतिपयको ठहर छ ।
एमालेका महिला नेता, कार्यकर्ता पनि त्यसप्रति असन्तुष्ट छन् । एमाले निकट अखिल नेपाल महिला सङ्घकी जिल्ला अध्यक्ष सावित्रा रानाले आफूहरु निर्णायक ठाउँमा हुँदाहुँदै पनि महिलालाई नेतृत्वमा उभ्याउन नसकिएको स्वीकार गरिन्। ‘झट्ट हेर्दा महिलाहरु नेतृत्वमा नआएजस्तो देखिएपनि वडा किमिटिमा अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता भएको छ”, उनले भनिन्, ‘आफ्नो योग्यता, क्षमता बढाउँदै नेतृत्व विकास गरेर अघि आउने वातावरण महिलालाई बनेको छ।’
गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेकी रानाले पहिलेदेखि नै जकडिएको संरचनाका कारण राजनीतिको अग्रभागमा पुरुष देखिने गरेको बताइन्। समावेशिताको आवाज उठ्न थालेपछि पहिलेको तुलनामा राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बढेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले अपेक्षा गरेझैँ त भएको छैन, तर केही उपलब्धि चाहिँ पक्कै भएका छन्, त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘नेतृत्वदायी भूमिकामा आउन नसक्नुलाई महिलाको असक्षमतासँग जोडेर हेर्न मिल्दैन ।’
पार्टीमा लामो समय योगदान गरेका पुरष नेतामाथि अन्याय हुने ठानेर पनि कतिपय महिला नेतृत्वमा आउन हिच्किचाउने गरेका छन् । समावेशिताका नाममा महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउँदा पुरुषलाई अन्याय हुन्छ की ? भन्ने दयापूर्ण मनोदशा पनि बेलाबेला राजनीतिमा देखा पर्छ । प्रदेशसभा सदस्य रानाले अहिलको वडा अधिवेशनमा महिलाहरु पनि नेतृत्वका हकदार हुन् र उनीहरु सक्षम छन् भन्ने परिदृश्य देखिएको बताए। एमाले जिल्ला सचिव विष्णु भुसालले अध्यक्षमै नआएपनि पदाधिकारीसहित किमिटिमा महिलाहरुको राम्रो उपस्थिति रहेको बताए । “वडा कमिटिमा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी नै महिलाहरु चुनिनुभएको छ, यसलाई राम्रो उपलब्धि मान्नुपर्छ’, उनले भने।
योगदान, क्रियाशीलता, समय व्यवस्थापन आदि कारणले नेतृत्वमा पुरुषको अग्रसरता बढी देखिनु स्वभाविक रहेको सचिव भुसालले बताए । वडा तहमा बसेर पार्टी काममा क्रियाशील हुने महिलाहरुको संख्या न्यून भएको स्थितिमा अहिले देखिएको सहभागितालाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘नेतृत्वमा महिला आउन असक्षम हुनुहुन्छ भन्ने होइन, यही प्रक्रियाबाट महिला अघि आउने वातावरण बन्छ, पार्टीले त्यसका लागि उपयुक्त भूमिका खेल्छ’, उनले भने। सचिव भुसालले समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गरेर पार्टी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
शनिबार देशभर एकैसाथ एमालेको वडा अधिवेशन शुरु भएको थियो । जसअन्तर्गत यहाँका ७१ वडामा सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व चयन भएको छ । बाँकी रहेका १४ वडामा आजदेखि अधिवेशनको प्रकृया आरम्भ भएको एमाले जिल्ला कमिटिले जनाएको छ । महाधिवेशनपूर्व तल्ला तहमा भइरहेका भेला, अधिवेशनले एमाले वृत्तमा उत्साह थपेको बताइएको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक ७, २०७८, ०५:००:००
अहिले नै सबै दललाई किन छ महाधिवेशनको चटारो?
माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुने
राष्ट्रपतिले गरिन् संसद अधिवेशन आह्वान
माओवादी धनगढी उपमहानगरको अध्यक्षमा सुरज खाती निर्वाचित
माधव र प्रचण्डलाई आश्वस्त पार्न उच्चस्तरीय संयन्त्र: रामचन्द्र पौडेल